အောင်လအန်ဆန်း ရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှု နဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်သွားခဲ့တဲ့ #မာတင်ငုယင် - SPORTS MYANMAR
အောင်လအန်ဆန်း ရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှု နဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်သွားခဲ့တဲ့ #မာတင်ငုယင်
By Edi Tor April 12, 2019
မာတင်ငုယင်ဟာ ဗီယက်နမ် နွယ်ဖွား သြစတေးလျ ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ၊ မနေ့ညကတော့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ မနီလာ မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ One : Roots of Honor ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဆု အတွက် စိန်ခေါ်လာသူ မွန်ဂိုလီယား နိုင်ငံသား ဂျဒမ်ဘာ နဲ့ ထိုးသတ်ခဲ့ ပါတယ်။
One : Roots of Honor ပြိုင်ပွဲဟာ မာတင် ငုယင် တို့ပွဲကို အဓိက တည်ပြီး ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ၊ မာတင် ကတော့ သူ့ရဲ့ One Featherweight World Champion ဆုကြီးကို ကာကွယ် ထိုးသတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မာတင်ဟာ ဒီပွဲ အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေကို ပြုလုပ် ရာမှာ မြန်မာ ပြည်ဖွား ဖိုက်တာတွေ ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း ၊ သီရယ်ထန် တို့ နဲ့ အတူ လေ့ကျင့်ခဲ့တာပါ။ အောင်လအန်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ကလဲ သူ့ရဲ့ ဘော်ဒါ ငုယင်ရဲ့ ပွဲစဉ်ကို လိုက်ပါ ၀န်းရံဖို့ မနီလာ ကို လိုက်ပါ လာခဲ့တဲ့ အကြောင်း သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကြိုတင် အသိပေး ထားခဲ့ ပါတယ်။
တကယ်တမ်း ထိုးသတ်ဖို့ ပွဲထွက်လာချိန်မှာတော့ အောင်လဟာ မာတင်ရဲ့ နောက်ကနေ လိုက်ပါလာခဲ့ကာ ၊ ပွဲ မစတင်မီ အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေကို မျှဝေရင်း စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မြှင့်တင်မှုတွေကို ပြုလုပ် ပေးခဲ့ ပါတယ်။
ဂျဒမ်ဘာဟာ ပွဲအစပိုင်းမှာ မာတင် အတွက် ပြိုင်ဘက်ကောင်း တစ်ဦးလို့ ထင်မှတ်လောက်အောင် ဟန်ကောင်းခဲ့ပေမယ့် ၊ ထိုးသတ်ချိန် ကြာလာနဲ့ အမျှ အားနည်းချက်တွေ ဆက်တိုက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။ မာတင်ငုယင် ကတော့ အဲဒီ အခွင့်အရေး တွေကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ၊ ဒုတိယ အချီ စတင်လို့ တစ်မီးနစ် အကြာမှာပဲ အလဲထိုး နဲ့ အနိုင် ယူသွားခဲ့ ပါတယ်။
ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူလိုက် ချိန်မှာတော့ အောင်လဟာ ကြိုးဝိုင်းအတွင်း ပြေးဝင်းလာခဲ့ပြီး ၊ မာတင်ကို ပွေ့ဖက်ကာ အောင်ပွဲ ခံခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မာတင်ကလဲ အောင်လရဲ့ ကူညီ လေ့ကျင့်ပေးမှု တွေအတွက် ကျေးဇူး အရမ်းတင်ကြောင်းကို ဦးညွတ်ကာ ပြသသွားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ ချန်ပီယံ သရဖူ ဆုကို ချီးမြင့် ချိန်မှာတော့ One Championship ရဲ့ ဥက္ကဌ ချာထရီ ကိုယ်တိုင် ကွင်းထဲကို ၀င်ရောက်ကာ အပ်နှင်းခဲ့ပြီး ၊ မာတင်ရဲ့ ရင်တွင်း စကားတွေကို ပြောကြားစေခဲ့ ပါတယ်။
အဲဒီလို ပြောဆိုရာမှာ မာတင်ငုယင်က ” Featherweight တန်းဟာ သူ့ရဲ့ ပိုင်နက်ဖြစ်တယ်လို့ ကြွေးကြော်ပြီး စတင် အောင်ပွဲခံခဲ့ ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အခုလို ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်နိုင်အောင် အများကြီး ကူညီ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ အောင်လန်အန်ဆန်းကိုလဲ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိကြောင်းကို ပထမဆုံး စကားအဖြစ် စတင် ပြောကြား သွားခဲ့တာပါ။
မာတင်ရဲ့ ပြောကြားချက်ဟာ အမှတ်တမဲ့ ကြည့်ရင်တော့ သူ့ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ၊ အောင်လ အတွက်တော့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်ကို အများကြီး မြင့်တက် သွားစေခဲ့ ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖီလစ်ပိုင် ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဗီရာ နဲ့ မထိုးသတ်ခင် သူ့ နိုင်ငံ ၊ သူ့ ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှောက်မှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ တစ်ယောက်က အခြား ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ တစ်ယောက်ကို ဂုဏ်ပြု စကားဆိုပေးခဲ့တာ အများကြီးကို အဓိပ္ပါယ် ရှိသွားခဲ့တာပါ။
ဖီလစ်ပိုင် ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ ဗီရာ နဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပြိုင်ဘက်ကို အပြင်မှာ ကိုယ်တွေ့ မြင်ဖူးသွားကြ သလို ၊ အောင်လန် ရဲ့ အရည်အသွေး ကိုလဲ မှန်းဆ တွက်ကြည့်နေလောက် ကြပါပြီ။
အောင်လ ကတော့ တပည့်တွေ မွေးထုတ်ပေးရုံတင် မဟုတ်ပဲ ၊ မိတ်ဆွေး အပေါင်းအသင်းတွေကိုပါ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ တွေဖြစ်ဖို့ အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေ ပေးနေပြီဗျာ…. နောက်ဆိုရင် ဖိလစ်ပိုင်က Team Kalay လိုမျိုး ၊ အောင်လ အန်ဆန်း လဲ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံတွေ အများကြီး မွေးထုတ်ပေး နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်………..
အောငျလအနျဆနျး ရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှု နဲ့အတူ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျသှားခဲ့တဲ့ #မာတငျငုယငျ
မာတငျငုယငျဟာ ဗီယကျနမျ နှယျဖှား သွစတေးလြ ဖိုကျတာ တဈယောကျ ဖွဈပွီး ၊ မနညေ့ကတော့ ဖိလဈပိုငျ နိုငျငံ မနီလာ မွို့မှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ One : Roots of Honor ပွိုငျပှဲမှာ ခနျြပီယံဆု အတှကျ စိနျချေါလာသူ မှနျဂိုလီယား နိုငျငံသား ဂဒြမျဘာ နဲ့ ထိုးသတျခဲ့ ပါတယျ။
One : Roots of Honor ပွိုငျပှဲဟာ မာတငျ ငုယငျ တို့ပှဲကို အဓိက တညျပွီး ကငျြးပခဲ့တာ ဖွဈကာ ၊ မာတငျ ကတော့ သူ့ရဲ့ One Featherweight World Champion ဆုကွီးကို ကာကှယျ ထိုးသတျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
မာတငျဟာ ဒီပှဲ အတှကျ ကွိုတငျ ပွငျဆငျမှုတှကေို ပွုလုပျ ရာမှာ မွနျမာ ပွညျဖှား ဖိုကျတာတှေ ဖွဈတဲ့ အောငျလအနျဆနျး ၊ သီရယျထနျ တို့ နဲ့ အတူ လကေ့ငျြ့ခဲ့တာပါ။ အောငျလအနျဆနျး ကိုယျတိုငျ ကလဲ သူ့ရဲ့ ဘျောဒါ ငုယငျရဲ့ ပှဲစဉျကို လိုကျပါ ၀နျးရံဖို့ မနီလာ ကို လိုကျပါ လာခဲ့တဲ့ အကွောငျး သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှကေို ကွိုတငျ အသိပေး ထားခဲ့ ပါတယျ။
တကယျတမျး ထိုးသတျဖို့ ပှဲထှကျလာခြိနျမှာတော့ အောငျလဟာ မာတငျရဲ့ နောကျကနေ လိုကျပါလာခဲ့ကာ ၊ ပှဲ မစတငျမီ အခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံ တှကေို မြှဝရေငျး စိတျဓါတျပိုငျး ဆိုငျရာ မွှငျ့တငျမှုတှကေို ပွုလုပျ ပေးခဲ့ ပါတယျ။
ဂဒြမျဘာဟာ ပှဲအစပိုငျးမှာ မာတငျ အတှကျ ပွိုငျဘကျကောငျး တဈဦးလို့ ထငျမှတျလောကျအောငျ ဟနျကောငျးခဲ့ပမေယျ့ ၊ ထိုးသတျခြိနျ ကွာလာနဲ့ အမြှ အားနညျးခကျြတှေ ဆကျတိုကျ ပျေါထှကျလာခဲ့တာပါ။ မာတငျငုယငျ ကတော့ အဲဒီ အခှငျ့အရေး တှကေို အမိအရ ဆုပျကိုငျပွီး ၊ ဒုတိယ အခြီ စတငျလို့ တဈမီးနဈ အကွာမှာပဲ အလဲထိုး နဲ့ အနိုငျ ယူသှားခဲ့ ပါတယျ။
ပွိုငျဘကျကို အနိုငျယူလိုကျ ခြိနျမှာတော့ အောငျလဟာ ကွိုးဝိုငျးအတှငျး ပွေးဝငျးလာခဲ့ပွီး ၊ မာတငျကို ပှဖေ့ကျကာ အောငျပှဲ ခံခဲ့ပါတယျ။ တဈဆကျတညျးမှာပဲ မာတငျကလဲ အောငျလရဲ့ ကူညီ လကေ့ငျြ့ပေးမှု တှအေတှကျ ကြေးဇူး အရမျးတငျကွောငျးကို ဦးညှတျကာ ပွသသှားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပွငျ သူ့ရဲ့ ခနျြပီယံ သရဖူ ဆုကို ခြီးမွငျ့ ခြိနျမှာတော့ One Championship ရဲ့ ဥက်ကဌ ခြာထရီ ကိုယျတိုငျ ကှငျးထဲကို ၀ငျရောကျကာ အပျနှငျးခဲ့ပွီး ၊ မာတငျရဲ့ ရငျတှငျး စကားတှကေို ပွောကွားစခေဲ့ ပါတယျ။
အဲဒီလို ပွောဆိုရာမှာ မာတငျငုယငျက ” Featherweight တနျးဟာ သူ့ရဲ့ ပိုငျနကျဖွဈတယျလို့ ကွှေးကွျောပွီး စတငျ အောငျပှဲခံခဲ့ ပါတယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ အခုလို ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျနိုငျအောငျ အမြားကွီး ကူညီ လကေ့ငျြ့ပေးခဲ့တဲ့ အောငျလနျအနျဆနျးကိုလဲ ကြေးဇူး အထူးတငျရှိကွောငျးကို ပထမဆုံး စကားအဖွဈ စတငျ ပွောကွား သှားခဲ့တာပါ။
မာတငျရဲ့ ပွောကွားခကျြဟာ အမှတျတမဲ့ ကွညျ့ရငျတော့ သူ့ကြေးဇူးရှိတယျလို့ ထငျရပမေယျ့ ၊ အောငျလ အတှကျတော့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပျကို အမြားကွီး မွငျ့တကျ သှားစခေဲ့ ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဖီလဈပိုငျ ဟဲဗီးဝိတျ ခနျြပီယံ ဗီရာ နဲ့ မထိုးသတျခငျ သူ့ နိုငျငံ ၊ သူ့ ပရိသတျတှေ ရှမှေ့ောကျမှာ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ တဈယောကျက အခွား ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ တဈယောကျကို ဂုဏျပွု စကားဆိုပေးခဲ့တာ အမြားကွီးကို အဓိပ်ပါယျ ရှိသှားခဲ့တာပါ။
ဖီလဈပိုငျ ပရိသတျတှေ အတှကျတော့ ဗီရာ နဲ့ ထိုးသတျမယျ့ ပွိုငျဘကျကို အပွငျမှာ ကိုယျတှေ့ မွငျဖူးသှားကွ သလို ၊ အောငျလနျ ရဲ့ အရညျအသှေး ကိုလဲ မှနျးဆ တှကျကွညျ့နလေောကျ ကွပါပွီ။
အောငျလ ကတော့ တပညျ့တှေ မှေးထုတျပေးရုံတငျ မဟုတျပဲ ၊ မိတျဆှေး အပေါငျးအသငျးတှကေိုပါ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ တှဖွေဈဖို့ အကူအညီ အထောကျအပံ့တှေ ပေးနပွေီဗြာ…. နောကျဆိုရငျ ဖိလဈပိုငျက Team Kalay လိုမြိုး ၊ အောငျလ အနျဆနျး လဲ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံတှေ အမြားကွီး မှေးထုတျပေး နိုငျပါစလေို့ ဆန်ဒပွုလြှကျ………..